गृहिणीबाट व्यवसायी बनें- रञ्जना गुरुङ (भिडियो सहित) - Enavanari
गृहिणीबाट व्यवसायी बनें- रञ्जना गुरुङ (भिडियो सहित)
हाल बजारमा बुटिकबाट तयार पारिएका पहिरनहरुको माग बढ्दो छ । नयाँ नयाँ डिजाइन र फेसन सुँहाउदो पहिरनको माग बढेसंगै नेपालमा पनि यो व्यवसाय मौलाउदै गएको छ । पछिल्लो समय व्यवसाय गर्ने इच्छा भएका महिलाहरुका लागि यो राम्रो र सहज व्यवसायको रुपमा फस्टाएको छ । रोजगारीका लागि विदेशिन लागेका थुप्रै युवा पुस्तालाई बुटिक व्यवसायले नेपालमै स्वरोजगार बन्न मद्दत गरेको छ भने गृहिणीको रुपमा घर भित्रै रुमल्लिएका नारीहरु समेत अहिले यो व्यवसाय तर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । यस्तै मध्ये एक बुटिक व्यवसायी हुन् रञ्जना गुरुङ । उनले ललितपुरको कुपण्डोलमा इभा फेशन नामक बुटिक संचालन गर्दै आइरहेकी छिन् ।
इभा फेशन संचालन गर्नु भएको कति भयो ?
विगत पाँच वर्ष देखि संचालन गर्दै आइरहेकी छु ।
त्यो भन्दा अगाडी के मा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ?
त्यो भन्दा अगाडी म पूर्ण गृहिणीको भूमिकामा थिए, नानीहरु पनि सानै थिए, अव ठुला भए, अव त केहि गरौं, समयको सदुपयोग गरांै भनेर बुटिक व्यसाय सुरु गरे ।
गृहिणीबाट व्यवसायी बन्दा सुरुवाती दिनमा के कस्ता परिस्थिति सामना गर्नु पर्यो ?
हरेक व्यवसाय सुरु गर्दा सुरुवाती दिन कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छन् नै, मैले व्यवसाय सुरु गर्दा पनि सुरुवाती चरणमा धेरै किसिमका अप्ठ्याराहरु सामना गरे, ती परिस्थितिहरुलाई पार गर्दै अहिले भने सहज भएको छ, बानी परेको छ ।
व्यवसायी बन्न बुटिक नै खोल्ने सोच कसरी आयो ?
मैले झण्डै तीन दशक अगाडी पनि बागबजारमा एक वर्ष जति बुटिकको बारेमा सिकेकी थिए, नयाँ व्यवसायमा जादा आफूले थोरै भए पनि ज्ञान हासिल गरेको क्षेत्रमा जाउ भन्ने सोचले यो व्यवसाय रोजे ।
किन तालिम लिएको यति लामो समय पछि व्यवसाय संचालन गर्नु भयो ?
तीस वर्ष अगाडी विहे भयो, विहे पछि श्रीमानको काम सिंगापुरमा भएकोले २० वर्ष उतै बसियो, त्यसैले पनि नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न ढिला भएको हो । सिंगापुरको लामो बसाईमा पनि बुटिक सम्वन्धी केहि जानकारी लिने अवसर मिल्यो, त्यो ज्ञानले पनि बुटिक व्यवसाय संचालन गर्न उत्प्रेरित गर्यो ।
यो व्यवसायमा निकै प्रतिष्पर्धा छ भनिन्छ नि ?
हो, एकदमै प्रतिष्पर्धा छ ।
यो प्रतिष्पर्धामा कसरी अगाडी बढिरहनु भएको छ त ?
ग्राहकलाई वहाँहरुको चाहना बुझेर राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिएका छौं, हामीले दिएको सेवाबाट प्रभावित भएर वहाँहरु आफू मात्र नभई आफन्त र साथीहरुलाई समेत लिएर आउने गर्नुहुन्छ ।
बुटिक महंगो हुन्छ रे नि ?
महंगो होइन, त्यस्तो लागेको मात्रै हो, बुटिकका धेरै काम हातले गर्नु पर्छ, मेहनत धेरै गर्नु पर्छ, गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्नु पर्छ त्यसैले पनि महंगो जस्तो लागेको हो ।
बुटिकको पनि सिजन हुन्छ रे हो ?
हो नि, विहेका लगन भएका महिनाहरुमा कामको लोड बढि हुन्छ ।
गृहिणीबाट व्यवसायी बन्नु भएको छ, घरपरिवारबाट सहयोग पाउनु भएको छ त ?
श्रीमानको पूर्ण सहयोग पाएकी छु र सफल भएकी छु । मैले नभ्याउदा सबै काममा श्रीमानले सघाउनु हुन्छ ।
आम्दानीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिदै अन्य शाखा पनि खोलेर सेवा दिने योजनामा छौं ।
इभा फेशनको विशेषता के हुन् ?
ग्राहकलाई पूर्ण सन्तुष्टि दिन सक्नु नै हाम्रो विशेषता हो ।